အစိုးရကို မွန်ပြည်သစ်ပါတီသံသယရှိနေ > မွန်သတင်းအေဂျင်စီ
Home / သတင်း / အစိုးရကို မွန်ပြည်သစ်ပါတီသံသယရှိနေ
မွန်သတင်းအေဂျင်စီ June 20, 2012 သတင်း3Comments 135 Views
ရေးသားသူ: NMSP > မွန်ပြည်သစ်ပါတီ
လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီ – အပစ်ရပ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ ယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ရေး မြန်မာအစိုးရနှင့်သဘောတူညီချက်ထားရှိမှုအပေါ် သံသယဖြစ်ဖွယ်ကိစ္စရပ်များတွေ့ရှိနေရကြောင်း မွန်ပြည်သစ်ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး နိုင်ဟံသာက ယနေ့ကျင်းပသည့် လူထုတွေ့ဆုံရှင်းလင်းပွဲတရပ်တွင် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီနှင့် လက်ရှိအစိုးရသဘောတူညီချက်တွင် “၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအထိ အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါက စုစည်းနိုင်သောအပစ်ရပ်အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အစိုးရကိုယ်စားလှယ်တို့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ စတင်ဖေါ်ဆောင်သွားရန်” စသည့်အချက် ပါရှိခဲ့သည်။
“အခုအသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီက (၁) တရားဝင်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ ထူထောင်ပါ၊ (၂) ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပါ၊ (၃) ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ရင် လွှတ်တော်ထဲတင်ပြခွင့်ရှိမယ်၊ (၄) တစ်ခုတည်းသော တပ်မတော်ဖြစ်ရမယ်လို့ သူတို့ဆီကသဘောထားကို တွေ့ရှိခဲ့တယ်” ဟု နိုင်ဟံသာက ပြောသည်။
မေလတွင်အစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီတွင် ဒုသမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်း-ဥက္ကဌ၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဦးသိန်းဇော်-ဒု ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒု တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးဝင်း၊ ရထား ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း၊ အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ဝန်ကြီး ၇ ဦး၊ ပြည်နယ်/တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ၁၀ ဦး၊ ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ၁၀ ဦး၊ နယ်စပ်ရေးရာ ဒု ဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် ဇော်ဝင်းနှင့် ဒု ရှေ့နေချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး အပါအဝင်၂ ဦး၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၉ ဦး၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၉ ဦး၊ အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်မျိုးကြည် အပါအဝင် စုစုပေါင်း ၅၂ ဦးဖြင့် ဖွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့၏ သဘောထားကိုရညွှန်းပြောကြားသည်ဟု သိရသည်။
ယနေ့ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ဘုရားသုံးဆူဒေသရှိ ဂျပန်ရေတွင်းရွာ၊ အလယ်တန်းကျောင်း မွန်ပြည်သစ်ပါတီမှ လူထုတွေ့ဆုံရှင်းလင်းပွဲ နံနက်ပိုင်းအစီအစဉ်တွင် အနီးအနားတဝိုက်ကျေးရွာများမှ ကျေးရွာအကြီးအကဲများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးဌာနများမှ ဝန်ထမ်းများအား နံနက်ပိုင်းတွင်တစ်ကြိမ်၊ ဘုရားသုံးဆူမြို့ခံ မြို့မိမြို့ဖများ၊ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် မွန်းလွဲပိုင်းတွင်တစ်ကြိမ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
“ဒီလိုသဘောထားမျိုးက၂၀၁၀ ခုနှစ် ဧပြီလ နယ်ခြားစောင့်တပ် သို့မဟုတ် ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့ အနေအထားမျိုးလို ပြန်ဖြစ်လာနိုင်တယ် ၊ ဒါကို ဘယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မှ လက်မခံနိုင်ပါဘူး” ဟု နိုင်ဟံသာက ပြောသည်။
အလားတူ ယခုလဆန်းပိုင်းမှ၍ မွန်ပြည်သစ်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များဦးဆောင်ပြီး မွန်ပြည်သစ်ဗဟိုဌာနချုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသ၊ သထုံခရိုင်၊ မော်လမြိုင်ခရိုင်၊ ထားဝယ်ခရိုင်ရှိ ကျေးရွာများနှင့် မြို့ပေါ်များတွင် မွန်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအပါအဝင် ဒေသခံများကိုရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်၍ သဘောထားကောက်ယူနေကြဆဲ ဖြစ်သည်။
NMSP မွန်ပြည်သစ်ပါတီ 2012-06-20
Tags NMSP မွန်ပြည်သစ်ပါတီ
Previous မွန်ပြည်သစ်ပါတီခေါင်းဆောင်များ လူထုသဘောထားကောက်ခံနေ
Next မြဝတီမြို့ပေါ်ရွှေဆိုင်ဓါးပြတိုက်မှု ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့
You are right Nai Han Tha,
Burman Generals and politicians never recognize ” the Ethnic “.
Why all ethnic are still hopping from their ENEMy?
U2’s super star BONO said ” I CAN LIVE WITH YOU OR WITHOUT YOU”.
Government never trust u too,Nai Han Tha.And,Dont care ur useless arms group.All ethnics in Myanmar are pure,except….n.U know it?All ethnics knew it.
The highest duty of politics is to make friends from enemy. So, Naing Han Thar and NMSP’s work is right. We will change Burmese Generals view and idea toaproper way that we could go on. NMSP will lead the future federal Mon State by the result of present efforts.